I-KIWI JR.: UKUPHOLISA UKUBUYISA UKUHLOLWA KWEALBHAMU - IINDABA
Kwi-albhamu yabo yesibini kunye neyokuqala kwi-Sub Pop, amaqela e-indie rock aseCanada adibanisa isiginci esine-sardonic.
Dlala iTrek Abavoti abangagqitywanga -I-Kiwi Jr.Ukuhamba Ibhendi / Thenga
U-Kiwi Jr. 'UJeremy Gaudet unelizwi elithozamisayo ngokwendalo elihlaziya ukuqaphela kwakhe. Ngaphezulu kwekhosi yecwecwe lesibini leqela Ukubuyisa Okupholileyo , uthatha ukudlula kwii-drones zase-ofisini, abafundi bezikolo zobugcisa, isikolo esilahla iifilimu, ii-alarms zenkcubeko, abadlali bezemidlalo, abantu abakhathalele kakhulu kwaye abantu abakhathalele kakhulu-ngokwenene nabani na ophila ubomi obungacaciswanga okanye ovavanywe kakhulu. Ukanti kuso sonke isigwebo kumazwi akhe, awusoze uve udelelo kwilizwi lakhe, eliphethe u-Stephen Malkmus ongathethekiyo kunye nokumangaliswa kuka-Jonathan Richman. Iyintombazana, ngamanye amaxesha iphantse ibe yithenda, ngomgangatho womntakwabo owenza nokuba eyona ndawo yakhe yokusika umhlaba ibengathi kukuthamba kakhulu. Ukuba ukubize ngegama, unganobunzima ekucingeni ukuba ebethetha nantoni na ngalo.
Kwi-2019 yabo yokuqala Imali yebhola , Iqela laseKhanada lenze ukubambelela ngenkuthalo kwezinye zeemarike zeParquet Courts, lihlangabeza amagwegwe e-jangly kunye nokuxhomekeka okuthembekileyo kwesipelesi seSpongeBob Pez. Ukubuyisa Okupholileyo, eyabo yokuqala kwi-Sub Pop, igcina iitempos ezingonwabisiyo kunye nokuziva kweqela, ishiya umkhondo weekomityi zeplastikhi ezibomvu ekuvukeni kwayo njengoko ubukhulu becala ikhupha isiginci sombane esinee-acoustic, ezihamba kunye nokutshiza kwepiyano, ilungu lomzimba kunye neharmonica. Kukungabi namonde, i-slacker-rock imaging ye-albhamu yesiqhelo, Umendo u-61 waphinda watyelelwa ngendlela kaHarlem Iihippies .
Kwakhona isiginci sabo sigxunyekwe ngokugqibeleleyo. Kwilizwe elirhuqwayo Kuphela apha lokucheba iinwele (ewe, ingoma yokucheba iinwele, kwaye hayi, uthelekiso lwePavumente aluzange luyikhathaze le band), ezinye iingoma ziyakhwaza kunye noGeorge Harrison -fi kunye ne-lo-fi splendors zihlala ngokudibeneyo. Kodwa ukuba loo magita asisiseko kwezi ngoma, iprozi kaGaudet isoloko ingumbindi. Ibali lakhe le-sardonic kunye ne-asides ehlekisayo imile nangaphezulu kwe-12-umtya, nokuba uyathandabuza indawo yezobugcisa kubaVoti abangacaciswanga (ndithatha iifoto zeefoto zakho kwaye bashukumise abantu) okanye ukugcoba indlela yokuphila yasemaphandleni kwii-Highlights ze-100 (ndinayo iceba ukwakha indlu yam, indlu enkulu enkulu elizweni, i-16 terabytes yomhlaba ene-asterisk kunye ne-ampersand.)
KuTyler, uGaudet ukhumbula ukuwa kwigumbi eliluhlaza ngelixa usela isiqingatha somkhweli wentloko. Kwirekhodi eliZinzileyo lokuBamba, loo vignette isenokuba yadlala kwimbonakalo yobukrelekrele yebhanti emva kwekhethini elibomvu. Isenokuba yiLos Campesinos! Ingoma, nayo, ukuba umbalisi ubethile ngandlela ithile, kodwa uGaudet akaze ahambe emuncu. Vula Ukubuyisa Okupholileyo , yisingqisho esinye sentsingiselo emva koko siye kokulandelayo-kwaye kukho njalo, zininzi kakhulu ukufumana. AndingowaseMelika kodwa ndiziva ndibethwa ngamanye amaxesha / Xa ndingena kumnyango wekhusi ekuphumeni ndizama ukufunda imigca emitsha, uyaxhuzula ngaphezulu kwepark-punk yomkhondo wesihloko.
Ukuba iingoma zikaKiwi Jr. ziyasilela kwezinye zeeslacker-rock smartass uGaudet uzenzela ngokwakhe emva, kungenxa yokuba akasoloko enesigwebo sokutshatisa imbono yakhe engenantlonelo. Emva kokuzimela kwabo, amazwi kaJonathan Richman noStephen Malkmus acacisa iiseti ezithile zexabiso kunye neenkolelo. Ukugxeka kukaGaudet, kwelinye icala, uziva ngathi kukuma kunombono wehlabathi. Okwangoku, yenza ixesha elingenakuphikiswa, kwaye eli bhanti linxibe ukukhanya okuchukumisayo. Intoni Ukubuyisa Okupholileyo isilela kwi-heft eyenzelweyo ngokukhaba okungangxengwanga.
lil tecca siyakuthanda tecca
ingoma entsha ye-rob zombie
Indlu yaselwandle inxilile e la
Abaqambi bemidlalo yevidiyo ebalaseleyo
izitshixo ezimnyama bazalwane
inkqubo yestereyo yokuguqula itafile